MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်) для Андроид - скачать APK
главная страница » Приложения » Медицина » MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်)
Описание для MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်)
My OPD app ဆိုတာ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေရဲ့ပြင်ပ လူနာကြည့်တဲ့ ရက်နှင့် အချိန်တွေကို ရှာဖွေ လို့ရတဲ့ Android စနစ်သုံး မြန်မာမိုဘိုင်း Appတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခရိုင်ဆေးရုံ၊ တိုင်းဆေးရုံ၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြည့်များမှာ ရှိတဲ့ အထူးပြင်ပလူနာဌာနတွေ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်တွေမှာ ဖွင့်သလဲ၊ ဘယ်အချိန်တွေမှာ လူနာကြည့်လေ့ရှိလဲဆိုတာကို လေ့လာလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
ဒီapp က အပြင်ဆေးခန်းမှဆရာဝန်များ၊ဆေးရုံကြီးများမှာ လူနာကြည့်သော ဆရာဝန်များအတွက်လည်းအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။
လူနာကို ဆေးရုံကိုလွှဲတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဆေးရုံက ဘယ်နေ့မှာပြင်လူနာကြည့်လဲသိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်လွှဲချင်တဲ့ဆေးရုံက ကုသရေးဌာနတစ်ခုရဲ့ လူနာကြည့်ချိန်ကို Appထဲမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ. လူနာများအတွက် သွားပြရမယ့်အချိန်ကို တွက်ချက်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီapp က မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံများအတွက် တကယ်ထိရောက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းက ရရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့Product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
My OPD is an android based mobile application that provides information about OPD(Outpatient clinic ) time in public hospitals in Myanmar with the feature of searching and adding new data. It allows patients to easily know when to visit the specialty clinic in tertiary and secondary hospitals. Additionally, General practitioners can search OPD days in My OPD app when they haveapatient to refer to hospitals. It is very easy and convenient.
It also benefits doctors in public hospitals by referring patients to visit OPDs at the right time and right place.
We believe this is one of the must-have healthcare apps on your phone.
MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်) 2.0 Обновить
Changed logo and character.
Added notes in pages.
MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်) Tags
Uploaded by: Siêu Thuần Khiết
MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်) 2.0 (2)
Файл SHA1-хэша: 56779c0f0fefa2cc9e48b5fae081eb6b7c5b9e40
MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်) 1.0 (1)
Uploaded by: يحي بوشاب
Файл SHA1-хэша: 88937f4a4f8e68fd1a58280ee4f320be217ca484
Похоже на: MY OPD (လူနာကြည့်ချိန်)
Ещё от C2K